Samhall waa shirkad saamiley ah oo ay dowladdu leedahay oo ay hawsheedu tahay in ay shaqooyin micno iyo horuumar leh u abuurto dadka naafada ah. Ulajeeddada laga leeyahay in aad u shaqeysid Samhall waa in aad hor marisid karaankaaga shaqada iyo kartidaada aqoon- iyo xirfadeed. Waqtiga fog waxaad awoodi karee in aad shaqabixiye kale shaqo ka ag heshid.
Ma u baahantahay taageero iyo wax waafajin dheeraad ah? Agteenna ma uga qorantahay qof shaqa doon ah ahaan, mana tahay qof naafanimadiisu ay keeneyso in uu hooseeyo karaankiisa shaqo? Markaas waxay Samhall kuu noqon kartaa goob shaqo oo sax ah.
Samhall u shaqey. Filinku waa af-swiidhish.
Filinkan waxaad ku ogaaneysaa sida ay tahay in Samhall loo shaqeeyo.
Haddii aad daneyneysid in aad Samhall u shaqeysid waxaad ka billaabeysaa in aad taas u sheegtid xafiiska xiriirka shaqada. Haddii aad ku heshiisaan in ay taasi tahay fikrad fiican waa in aad Samhall booqataa. Wax dheeraad ah ayaad ka ogaaneysaa sida ay tahay in halkaas laga shaqeeyo oo lagu hormaro. Inta aadan shaqadaada billaabin waxaan adiga iyo Samhall idinla gaareynaa heshiis. Halkaas waxaa tusaale ahaan lagu sharraxayaa hadafka aad shaqada ka leedihid, tallaabooyinka kala duduwan ee aad u baahantahay in aad qaaddid iyo taageerada aad u baahan doontid midda ay tahay.
Inta aad shaqaaleysantahay oo dhan waxaa ku dhiirigelin doonaa, ku tartan gelin doona, kuna taageeri doona qofka madaxa kuu ah. Ula jeeddadu waa in aad maalin uun diyaar u noqotid in aad tallaabta xigto qaaddid, aadna horay ugu sii gudubtid shaqo aad u shaqeyneysid shaqabixiye kale.
Marka aad Samhall u shaqeyneysid waxaad heleysaa mushaar iyo waxyaabo kale oo shaqaalaha faa’iido u ah.
Samhall waxay ballan qaadeysaa in ay bixiso faa’iidooyinka shaqada ee heshiiska guud.